Ogaden News Agency (ONA) – Jaaliyadda Melbourne oo Guddi Cusub Dooratay Kuna Balantay Dardar-galinta Hawlaha Halganka
Jaaliyadda Melbourne oo Guddi Cusub Dooratay Kuna Balantay Dardar-galinta Hawlaha Halganka
waxaa maanta oo ay taariikhdu ahayd 3/08/14 shir heer sare ah oo labadii sanoba mar la qabto isugu yimid jaaliyada Melbourne, waxaana lagu doortaa maamul cusub. Shirkan ayay jaaliyadu ku dooratay gudigii wadi lahaa hawlaha jaaliyadda labadan sano ee soo socota.
Shirka oo furmay abaarihii 2:00pm ayaa waxaa furay gudoomiyii hore ee jaaliyada mudane Xikam Sheekj, asagoo halkaa kasoo jeediyay ajandayaasha shirka. Kadib waxaa wacdi diini ah kasoo jeediyay madasha shirka Sh. Cusaama Cabdalla oo jaaliyadii shirka ka soo qayb gashay u dardaarmay Allla kacabsiga, kuna booriyay dadkii goobta fadhiyay in ay garab istaagaan halganka shacabka socda ee shacabka S.Ogadeniya say iskaga dulqaadayaan gumaysatada Abasiiniya. Kadib gudoomiyihii hore iyo gudigiisii ayaa waxay halkaa kasoo jeediyeen waxqabadkii jaaliyada iyo marxaladii kala duwanaa ee jaaliyadu soo martay. Intaa kadib waxaa lawareegay hawshii gudidii doorashada oo soo bandhigay sida ay doorashadu udhacayso iyo waliba musharixiinta isa soo sharaxaysa.
Gudiga doorashada oo kala ahaa halgame Sh Fatxi, halgame Mohamed iyo halgame Xiiray ayaa waxay ku dhawaaqeen natiijada doorashada oo loo doortay xubnaha soo socda;
Gudoomiyaha cusub ee jaaliyada VIC mudane HASSAN AHMED NUR .
Gudoomiye kuxigeenka oo loo doortay mudane HASSAN ABDI (QUBI).
Waxay halkaa kasoo jeediyeen gudiga ladoortay khudbado aad iyo aad u qiima badan iyagoo u mahadnaqay Gudigii ka horeeyay hawlahay qabteen, sheegayna in ay dar dar galin doonaan jaaliyada meel kastana ay u gali doonaan qadiyada shacabka S Ogaadeeniya.
Waxaa xusid mudan oo halkaa khudbado kasoo jeediyay dhiiga dhaqaajiyay abwaanka wayn wmudane Cabdalla jeemis iyo Ugaas Ahmed iyo xubno kale oo badan waxayna intuba ku nuux nuux sadeen in ay goob kasta iyo goor walbaba ay garabtaagan yihii halganka shacabka Somalida Ogadeniya.